September 8, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on सोमबारदेखि देशैभरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आउँदै, केमा कति छुट पाइन्छ ?..हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ । सोमबारदेखि देशैभरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आउने भएको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड वडा दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ्ग र दुग्ध विकास संस्थानले उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ७३ वटा सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएका हुन् ।यो खबर रातोपाटीमा प्रकाशित छ । नेपाल खाद्य संस्थान उपत्यकाको ५ […]
September 8, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on ऎनसेल जोगाउने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर फालौ (भिडियो) !
काठमाडौँ – राज्यलाई अर्बाैँ घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आइतबारको संसद बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले […]
Omg.. ७० हजार नेपालीमा डेंगु ! यस्ता छन् १० लक्षण र बच्ने उपाय..हेर्नुहोस् ।
September 8, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on Omg.. ७० हजार नेपालीमा डेंगु ! यस्ता छन् १० लक्षण र बच्ने उपाय..हेर्नुहोस् ।
डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो । यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ यसले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ ।यो खबर लोकपथमा प्रकाशित छ । खास गरी […]
धमलाको श्रीमती एलिजाले दोहोरी खेलेर भाइरल भएकी ११ बर्षीय कमलालाई कसैले नसोचेको सहयोग गरिन..हेर्नुहोस् ।
September 8, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on धमलाको श्रीमती एलिजाले दोहोरी खेलेर भाइरल भएकी ११ बर्षीय कमलालाई कसैले नसोचेको सहयोग गरिन..हेर्नुहोस् ।
दोहोरी खेलेर भाइरल भएकी ११ बर्षीय कमलाले पाईन नसोचेको सहयोग,धमलाको श्रीमती एलिजाले १२ सम्म सित्तैमा पढाउने ! मै हु’ भन्ने गायक गायिकालाई समेत पछाडी पार्दै ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेले गाएको लाइभ दोहोरी यो समय युटुबमा अत्याधिक भाइरल भएको छ।उनले गाएको सबै गीतहरु भाइरल भए संगै उनि यो बेला राजधानी आएकी’ छिन।उनि राजधानी आए संगै […]
नगर प्रहरीले फ्याकिदियो डोकोको फलफुल सडकमा.. बिचरा डोको मा फल बोकेर हिड्ने मानिस लाई रुवाउने कस्तो नियत हो?सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्‍याउन १ सेयर गराै।
September 8, 2019 September 8, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on नगर प्रहरीले फ्याकिदियो डोकोको फलफुल सडकमा.. बिचरा डोको मा फल बोकेर हिड्ने मानिस लाई रुवाउने कस्तो नियत हो?सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्‍याउन १ सेयर गराै।
भरतपुर महानगरपालिका पुलचाेकमा नगर प्रहरीले ( नगरपालिका बाट खटाएको मानिस) डाेकोमा फलफूल बेच्न हिड्ने महिलाको फलफुल सडकमा फ्या.किदिएकाे छ। महिला अ लापविलाप गर्दै रुदैछिन्।सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्‍याउन १ सेयर गराै। हेर्नुहोस् भिडियो.. यो पनि हेर्नुहोस्…दशैअघि यातायात भाडा नबढ्ने आसन्न दशैं–तिहार सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि नहुने भएको छ । सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, व्यवसायीसहित बसेको बैठकले दशैंअघि […]
रबि जेल जादा १० दिन भात खाईनन कमलाले,रुदै गाईन रबिको लागि यस्तो गीत..हेरी जति सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
September 8, 2019 September 8, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on रबि जेल जादा १० दिन भात खाईनन कमलाले,रुदै गाईन रबिको लागि यस्तो गीत..हेरी जति सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
रबि जेल जादा १० दिन भात खाईनन कमलाले,रुदै गाईन रबिको लागि यस्तो गीत..हेर्नुहोस् भिडियो । यो पनि हेर्नुहोस् । सीसी क्यामेरा छल्दै सरकारी वकिलले यसरी घुस लिए, दिल्लीमा भेटिएका युवक आफ्नो भन्दै आउनेको लर्को (भिडियो) काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४२७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न […]